‘बियरले नुहाइदिँदा सास फेर्नै गाह्रो भो’ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : अध्यक्ष दाहालले गरे १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश
१७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन हुँदै
ट्रक र अटो एकआपसमा ठाेक्किदा दुई जनाको मृत्यु
पौडेल समूहद्वारा बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय
ओली-प्रचण्डको संयूक्त अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक सम्पन्न
‘बियरले नुहाइदिँदा सास फेर्नै गाह्रो भो’
सोमवार, पुस ११, २०७३
हाल हिट भइरहेको फिल्म ‘लुट–२’को ‘लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार’ बोलको आइटम गीतमा कम्मर मर्काएकी अभिनेत्री हुन्, एलिसा राई । यो गीतमा नाच्नुभन्दा अघि नै उनले दर्जनौँ म्युजिक भिडियो र दुई दर्जनजति सर्ट फिल्ममा काम गरेकी थिइन् । तर, यो एउटै गीतले उनलाई चर्चाको चुलीमा पु¥याएको छ । अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी उनी यही फिल्ममा दयाहाङ राईको अपोजिटमा देखिँदैछिन् । उनीसँग अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानीः
पर्दामा त निकै परिपक्व देखिनुहुन्छ । तर, बिलकुल फरक हुनुहुँदो रहेछ ?
हो । म रियलमा फुच्ची नै हो । तर, क्यामेरामा परिपक्व देखिन्छु । मेकअप र लुक्सले गर्दा होला ।
यही कारण पहिलोपल्ट भेट्दा निर्माता÷निर्देशक तपाईंसँग झुक्किँदा हुन् ?
अहिलेसम्म मलाई सुरुमा भेट्ने सबै जना प्रायः झुक्किनु नै भएको छ । चकित नै पर्नुहुन्छ । ‘स्क्रिनमा त अर्कै देखिनुभएको थियो, यहाँ त अलि योङ नै देखिनु हुँदोरहेछ’ भन्दै काममा लिऊँ कि नलिऊँ भनेर दोधारमा पर्नुहुन्छ । तर, काम गरेपछि चाहिँ ‘राम्रो गर्दी रहेछौ’ भनेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
‘लुट–२’को आइटम गीत रिलिज भइसकपछि तपाईंको परिचय पनि फेरियो । धेरैले ‘ठमेल बजारकी सुन्दरी’ भन्न थाले भन्ने सुनिन्छ नि ?
हो नि । आफ्नो नामभन्दा पनि आफूले गरेको कामबाट चिनिँदा खुशी नै लागिरहेको छ । मैले राम्रो गर्न सकेको भएरै परिचय बदलिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
एउटै गीतले यति धेरै चर्चामा ल्याउँदा आफूलाई सम्हाल्न कत्तिको गाह्रो हुने रहेछ ?
‘ठमेल बजार’ गीतबाट मलाई धेरैले चिन्नुभयो । तर, योभन्दा अघि पनि सर्ट मुभिज र म्युजिक भिडियो गर्दै आइरहेकी थिएँ । त्यहाँबाट पनि मेरो उमेरका दर्शकले चिन्नुभएकै थियो । अहिले अलि धेरैजना चिन्नुभएको हो । तर, ‘ए मलाई अब धेरैले चिन्यो’ भन्दै कसैलाई नगन्ने टाइपको केटी होइन म । किनकि, मलाई म कहाँबाट आएकी हुँ र कसरी बस्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । मैले आफ्नो धरातल बिर्सिएको छुइन ।
तपाईंलाई ‘लुट–२’मा कसरी अफर आयो ?
ब्ल्याक हर्स प्रोडक्सनका दाइहरूले युट्युबमा मेरो म्युजिक भिडियो र सर्ट मुभीहरू हेर्नुहुन्थ्यो रहेछ । असिस्टेन्ट डिरेक्टर अनिल खड्काले मलाई ‘लुट–२’ का लागि यस्तो रोलका लागि केटी चाहिएको’ भनेर जानकारी दिँदै अफिसमा भेट्न बोलाउनुभयो । ‘लुट’ जस्तो हिट फिल्म बनाउने ब्यानरबाट फिल्मको अफर आएपछि एकछिन त म अलमलमा परेकी थिएँ । त्यसपछि भेट्न जाँदा निर्देशक निश्चल बस्नतले मलाई फिल्मको क्यारेक्टर र रोलबारे स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ‘बार गर्लको क्यारेक्टर हो, आइटम गीतमा नाच्नुपर्छ, बोल्ड देखिनुपर्छ, उसको मुखबाट भद्दा शब्दहरू आउनसक्छन्’ भन्नुभयो । नाच्न र डायलग भन्न लगाइयो । त्यसपछि छनोट भएकी हुँ ।
‘लुट’को आइटम डान्स भन्नासाथ दिमागमा झट्टै केही त आयो होला ?
पक्कै पनि । मलाई त सुषमा कार्कीले नाचेको ‘उध्रेको चोली’ गीतको याद आइहाल्यो । मेरो मनमा त्यही खालको गीत पो हो कि भन्ने पनि भयो । काम गरौँ कि नगरौँ भन्ने दोधारमा पनि परेँ । मैले एक हप्ताजति सोचेँ र काम गर्ने निर्णय लिएँ ।
बारमा आइटम गीतको सुटिङ सक्न तीन दिन लागेको थियो रे ?
हो नि । मलाई त त्यो गीत सुटिङ भन्नासाथ दुःखहरू मात्र याद आउँछ । तर, दुःखमै रमाइलो थियो । नाच्दाखेरि लाइटको तापले खलखली पसिना आउँथ्यो । यतिसम्म कि पसिनाले ढाडमा लगाएको डुप्लिकेट ट्याटू नै उप्काइदिएको थियो । मैले कहिल्यै बियर खाएको थिइनँ । तर, बियर जीउभरि खनाउनुपर्ने सिन गर्दाखेरि त कम्ती तनाव भएको थिएन । सबै बियर कसैले खाइदिएछ । जम्मा छ वटा बाँकी रहेको थियो । त्यसैले वान टेकमा ओके गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला बियरले नुहाइदिँदा त मलाई सास फेर्नै गाह्रो भयो । मुखभरि बियर परेको थियो । आँखा पनि पोलेको थियो ।
सुनिएअनुसार फिल्मका लागि तपाईलाई बार गर्लको भूमिका दिइए पनि तपाईंले त्यसभन्दा अघि डान्सबार र त्यहाँ काम गर्ने युवती देख्नुभएको थिएन ।
हो, मैले देखेको थिइनँ । त्यसैले मलाई सुरुमा एकदमै गाह्रो भयो । त्यही भएर मलाई ‘लुट’कै कलाकार सुशील पाण्डेले एक दिन ठमेलको डान्स बार लानुभयो । फस्ट टाइम मैले बार त्यहीँ देखेको थिएँ । केटीहरूले कसरी नाच्दा रहेछन्, कसरी हिँड्दा रहेछन्, बस्ने, खाने र ग्राहकसँग गर्ने व्यवहार सबै राम्रोसँग नियालेँ ।
फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राईंको अपोजिटमा काम गर्नु कत्तिको सहज थियो तपाईंका लागि ?
मैले त उहाँसँग काम गर्न पाउँछु होला भनेर कहिले पनि सोचेकी थिइनँ । उहाँ ‘कबड्डी’ फिल्मको डायलग ‘कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर’को त डबस्म्यासमा नक्कल नै गरेर फेसबुकमा राखेकी थिएँ । आज त्यही मान्छेसँग काम गर्न पाउँदा खुशी छु । उहाँसँग काम गर्दा धेरै सिक्ने मौका पाइयो । उहाँ धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ ।
अभिनयमा कसरी प्रवेश भयो ?
नृत्यबाटै भएको हो । म बच्चैदेखि विभिन्न संस्थाका कार्यक्रममा नाच्थेँ । त्यही भएर राई समुदायमा मलाई मेरो नामले चिन्दैन थिए, ‘नाच्ने बहिनी’ भनेर चिन्थे । त्यत्तिकैमा तीन वर्षअघि म एसएसली दिएर बसेको बेला किराती मिथकमा आधारित फिल्म ‘बिनायो’मा काम गर्नेे मौका पाएँ । त्यतिबेला १६ वर्षकी थिएँ ।
त्यतिबेला क्यामेरा फेस गर्दा कस्तो अनुभव भयो ?
त्यतिबेला त मलाई के ग¥या, के ग¥या जस्तो लाग्थ्यो । भाडाँकुटी खेल्या जस्तो के ! एउटै कुरा दुईतीन चोटि खिचेको जस्तो लाग्थ्यो । पहिलो पल्ट क्यामेरा देखेर होला मलाई त फिल्म खेलेको जस्तो नै लागेन । केही फिल नै नभएर होला, त्यति नर्भस पनि भइनँ । काम गराउँदा डिरेक्टरले पनि केटाकेटीलाई फकाएजसरी मायाले गराउनुभयो । पछि फिल्म हेरेपछि पो छक्क परेँ ।
‘बिनायो’पछि अभिनयलाई निरन्तरता दिनुभएको हो ?
होइन । पढाइका कारण दुई वर्ष ब्रेक गरेँ । प्लस टू सकेपछि युजिक भिडियो र सर्ट मुभीतिर काम गर्न थालेँ । सक्रिय भएर काम गरेको एक वर्ष मात्र हुँदैछ ।
छाटो समयमै यसरी चर्चामा आइएला भन्ने सोचिएको थियो ?
सोचिएको थिएन, इच्छा चाहिँ थियो । बच्चैदेखि म मान्छे त फिल्मी नै थिएँ । फिल्महरू पनि एकदमै हेर्थें । तर, मेरो परिवारबाट कोही यो क्षेत्रमा थिएन । त्यसैले यो क्षेत्रमा कसरी आउने भन्ने नै थाहा थिएन । कसैलाई चिनेको पनि थिएन ।
तपाईंको बढी रुचि चाहिँ नृत्यमा हो ?
हो । मैले थुप्रै इन्स्च्यिुटमा नृत्य सिकेँ । कल्चरल, क्लासिकल, बेली, साल्सा सबै खाले डान्स सिकेँ ।
फिल्मको सुटिङ सेटमा सबैले ‘फुच्ची’ भन्थे रे तपाईंलाई ?
मलाई मायाले सबैले फुच्ची भन्थे । खास गरी दया दाइ, निश्चल दाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो ।
अहिले त कामको अफर पनि बढेको होला ?
अलिअलि आइरहेको छ । मैले फिल्म चाहिँ ओके गरिसकेको अवस्था छैन ।
आइटम डान्सरका रूपमा बढी अफर आइरहेको होला ?
हो । फिल्ममा भन्दा पनि बढी म्युजिक भिडियो मेकरबाट यस्तो अफर आइरहेको छ । सबैले आइटम गीत जसरी नै ग्ल्यामरस रूपमा बारतिर नाच्नुपर्छ भन्दै अफर लिएर आउन थालेका छन् । अडियन्सलाई पनि मोनोटोनस हुन्छ भनेर मैले काम गरेको छुइन ।
‘लुट–२’मा काम गरिसकेपछि अभिनय सिक्नुपर्छ भन्ने महसुस पनि गर्नुभएछ ।
यो फिल्म खेलिसकेपछि अभिनय सिक्नुपर्छ भन्ने फिल भएको हो । त्योभन्दा अगाडि म अलि कच्चा नै थिएँ । अहिले पनि कच्चा नै छु । तीन महिना भयो, रंगकर्मी सुनील पोखरेलसँग अभिनय सिकिरहेकी छु ।
प्रेममा त परिएको छैन नि ?
छैन । भर्खर त करिअर सुरु भइरहेको छ । लभ गर्न फुर्सदै छैन । साप्ताहिक शुक्रबारबाट
राजेश पायल राई र सुनिता थेगिमको आवाजमा ”माथी है पर्यो ”सार्वजनिक
काठमाडौं । राई इज किङको उपाधि पाएका गायक राजेश पाय...
३ दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी सन्ध...
मलाई प्रतिष्पर्धाको क्रममा नयाँ साइकल आउने बताइयो । तर प्रतियोगिताको दिनसम्म आएन...
आज उधौली पर्व, योमरी पूर्णिमा र धान्य पूर्णिमा मनाइँदै
काठमाडौं । आज उधौली पर्व, युमरी पुन्हि(योमरी पूर्णिमा) र धान्य पूर्णिमा मनाईंदै...
प्रचण्ड दौडधुपले ओली गुटमा छटपटी !
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा एक माहिर खेलाडीका रुपमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट...
प्रकृति चन्द घटना : नेविसंघद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
काठमाडौं । प्रदेश-५ अन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर घटनाको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन ...
प्याज चोरीको घटना बढ्दै
एजेन्सी । पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली देशमा प्याजको आतंक मच्चिएको छ । नेपाल, भारत...
आइपुगे अयोध्याका जन्ती, स्वागतका लागि राष्ट्रपति भण्डारी जनकपुर जाँदै
जनकपुर । रामजानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवअन्तर्गत जनकपुरधाममा सप्ताहव्यापी कार्यक्...
अमिर खान के गर्दै छन् ?
भारतीय सिने जगतमा 'मिस्टर पर्फेक्सनिस्ट' भनेर चिनिने अभिनेता अमिर खान आफ्ना नयाँ...
ड्रागन फल मानिसका लागि गुणकारी,स्वादिष्ट र रोप्दा पनि सफा ,सुन्दर देखिने खाउँ खा...
अर्थतन्त्रको कमजोर व्यवस्थापन
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था स्वयम् सरकारले पनि प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा छ...
नेकपामा वामदेवको स्थान पाँचौ नम्बरमा
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नेता वामदेव गौतमको ...